मन्त्री ज्यू ? कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन निःशुल्क, स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? – Hamrosandesh.com
आज बिहानदेखि तल्लो पेट दुखिरहेको छ । चिसो महिना लागेदेखि नै महिनावारी हुनु एक हप्ता अगाडिदेखि ढाड दुख्ने व्यथा बोनसमा पाएको छु । सँधै जस्तै यो महिना पनि कहिले महिनावारी हुने हो केही पत्तो छैन । महिनै पिच्छे तालिका बदलिन्छ । कहिले महिनाको सुरुमै त कहिले महिनाको अन्त्यमा। निश्चित समयमै महिनावारी नहुने यो समस्याले गर्दा पुर्व योजना अनुसार केही तयारी गर्न पाउँदिन ।
तर, महिला शौचालयमा प्याडको व्यवस्था छैन । त्यसैले पटक पटक शौचालय गएँ, बगेको रगत पखालेर आएँ । रोक्नै त कहाँ सक्थें र !केही दिनअघि एक अनलाइनमा आएको समाचारले भने मन फुरुङ्ग बनायो । स्कुलमा महिनावारी भए के गर्ने, ज्ञानोदयमा डर छैन, प्याड झर्ने मेसिन छ नि’ शिर्षकको समाचार पढें । स्कुलमा महिनावारी हुँदा पढाइबीचमै छाडेर घर दौडिएको याद आयो । हामी केटी साथीहरु मात्र होइन पढाउने म्याडमहरुको कथा पनि त्यही थियो । थियो के भनौं, अझै छ ।